राजेन्द्र महतोपनि उपेन्द्रकै लाइनमा, ओलीलाई विश्वासको मत नदिन यस्तो भयो सहमति - News20 Media
राजेन्द्र महतोपनि उपेन्द्रकै लाइनमा, ओलीलाई विश्वासको मत नदिन यस्तो भयो सहमति
May 7, 2021 N20LeaveaComment on राजेन्द्र महतोपनि उपेन्द्रकै लाइनमा, ओलीलाई विश्वासको मत नदिन यस्तो भयो सहमति
काठमाडौं, २४ बैशाख
फुटको डिलमा पुगेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल अन्ततः फुटबाट जोगिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्नेमा दुई धारमा देखिएको जसपा अब एक भएर अघि बढ्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने पक्षमा पुगेका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर राजेन्द्र महतोलगायतका प्रभावशाली नेताहरुले साथ छोडेपछि पार्टीभित्र एक्लिएका छन् । २२ जनाभन्दा बढि सांसद अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पक्षमा उभिएपछि ठाकुर संकटमा परेका हुन् । पछिल्लो समय ठाकुरलाई राजेन्द्र महतोले साथ दिँदै आएका थिए ।
तर, पहिलेको सहमतिअनुसार महतोले संसदीय दलको नेतामा दाबी गरेको तर ठाकुरले दिन नमानेपछि यी दुई नेताबीच विवाद चर्किएको हो । महतोकै कारण ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सघाउनेगरि थालेको सांसदहरुको हस्ताक्षर अभियानसमेत प्रभावित बनेको छ । उता, प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनैपनि हालतमा विश्वासको मत दिन नहुने पक्षको नेतृत्व गरेका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने अब पार्टीको बैठक राखेर एउटा निर्णयमा पुग्ने तयारीमा छन् ।
यसको लागि उनले नेता महतोसँग पछिल्लो समय लगातार छलफल गरेका छन् । पार्टीले अब विश्वासको मत दिने वा नदिनेबारे एकमतले निर्णय गर्ने दोस्रो तहका नेताहरुको दाबी छ । नेता मनिष सुमनले ऋषि धमलासँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले भने,‘अब पार्टी फुटको खतरा टर्यो । अब छिट्टै पार्टी संसदीय दल र कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्छ । अनि एउटा निर्णय गर्छ ।’
जसपानिकट उच्च स्रोतकाअनुसार यादव र महतोबीचको पछिल्लो भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने सहमति भएको छ । बरु, यसको लागि महतोलाई दलको नेता बनाउन यादवले सघाउने पनि वचन दिएका छन् ।
भ्याक्सिन प्रकरणबारे सरकारमाथि विवेकशीलले उठायो यस्ता ४ गम्भीर प्रश्न
कोरोनाको बज्रपात, एकै घरका तीन दाजुभाइको निधन
यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! सेयर गरौँ भएकाले EBAY मा बेचौं !
रवि लामिछाने प्रस्तोता रहने ‘द लिडर’ को पहिलो अडिसन चितवनमा हुने
February 26, 2020 February 26, 2020 N20
कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका १ साताका लागि बन्द
April 22, 2021 N20